Dagaal culus oo ka socda deegaanno hoosyimaada degmada Buulo-burde ee Gobolka Hiiraan | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Dagaal culus oo ka socda deegaanno hoosyimaada degmada Buulo-burde ee Gobolka Hiiraan
Dagaal culus oo ka socda deegaanno hoosyimaada degmada Buulo-burde ee Gobolka Hiiraan
Wararka aan ka helayno deegaanno hoosyimaada degmada Buulo-burde ee Gobolka Hiiraan ayaa ku warramaya in Saaka halkaasi uu ka dhacay dagaal khasaaro gaystay oo u dhexeeya Ciidanka Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Wararku waxaa ay tilmaamayaan in wali la maqlayo rasaas teel teel ah oo dhinacyadu ay is weydaarsanayaan, sida ay kusoo warramayaan dadka degaanku.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii Ciidanka Dowladda Soomaaliya ay weerar ku qaadeen aroornimadii hore ee Saaka Degaanno Al-shabaab ay fariismi ku leeyihiin oo Hoos yimaada degmada Buulo-burde ee Gobolka Hiiraan, waxaana lasoo sheegayaa in ay wali socdaan howgalada ay wadaaan Ciidanka Dowladdu.
Wali waxaa la maqlayaa jugta iyo dhawaqa Rasaas culus oo dhinacyadu isku adeegsanayaan, waxaana dad goobjoogyaal ah ay kusoo warramayaan in ay macquul tahay in dagaalkaasi uu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac, walow ay adagtaahy in la helo xogta rasmiga ah ee dagaalkaasi.
Howlgalka ayaa waxa hogaminay taliyaha qeybta27 Ganaral axmed maxamed calasow (taredisho) iyadoo goobta lagu dagalamay tahay goob dhawan ay Ciidanka ay kula dagaalameen dagaalamayaal ka tirsan Al-shabaab oo fariisimo ku lahaa degaanadaasi.
Wali Saraakiisha Ciidanka horkacaysa kama hadlin howgalka, ma jirto faah faahin dheeraad ah oo ay bixiyeen, balse wararkii ugu dambeeyay waxaa ay sheegayaan in howgalkuw ali socdo.
Sidoo kale dhanka dagaalamayasha Al-shabaab wax war ah kaam soos aarin dagaalkaasi la sheegay in uu ka socdo deegaanno hoosyimaada degmada Buulo-burde ee Gobolka Hiiraan.
Maqaal horeTaliyaha Ciiddanka Kenya oo sheegay inaysan ka bixi doonin Somalia
Maqaal XigaDoorashada Aqalka sare oo kismaayo ka billaabatay iyo ammaanka oo la adkeeyay